Somaliland: Maxamed Biixi Yoonis Oo Beeniyay War Laga Baahiyay Oo Ah Inuu Noqon Doono Raysalwasaaraha Maamulka Muqdisho - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Maxamed Biixi Yoonis Oo Beeniyay War Laga Baahiyay Oo Ah Inuu...
Somaliland: Maxamed Biixi Yoonis Oo Beeniyay War Laga Baahiyay Oo Ah Inuu Noqon Doono Raysalwasaaraha Maamulka Muqdisho
Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Md. Maxamed Biixi Yoonis, ayaa si adag u beeniyay warar la baahiyay oo sheegaya inuu noqon doono raysalwasaaraha dambe ee Somaliya marka ay dhalato dawlad cusubi ee Somaliya.
Md. Biixi, oo isagoo jooga magaalada Nayroobi ee dalka Kenya xalay la soo xidhiidhay wargeyska Geeska Afrika, wuxuu wararkaas ku tilmaamay kuwo dacaayad ah oo lagu dilayo sumcadda uu ku dhex leeyahay shacabkiisa Somaliland, “Waxaan doonayaa inaan beeniyo warar dacaayad ah oo aanay waxba ka jirin oo la iga baahiyay oo sheegaya inaan noqonayo raysalwasaaraha dalka Somaliya.” ayuu yidhi Maxamed Biixi oo intaas raaciyay, “Warkaas waxba kama jiraan, waana dacaayad la iska garanayo cidda ka dambaysa oo lagu dilayo sumcadda aan ku dhex leeyahay dadkayga Somaliland. Anigu nin Somaliya iyo meel kale toona u socda ma ihi, waxaan ahay nin aaminsan qaddiyadda madaxbanaanida Somaliland, horena ugu soo shaqeeyay haddana u shaqaynaya, waxaan aaminsanahay Somaliland oo ka mid noqota dalalka la aqoonsanyahay oo hesha xaqa ay shacabka reer Somaliland leeyihin.”
Wuxuu intaas raaciyay, “Markaas warkaasi waa mid raqiisa oo aanay gebi ahaanba waxba ka jirin, mana aha wax iga suurtooba.”
Somalia: labo qof oo ka mid ahaa shaqaalaha Garoonka Aadan cade oo lagu dhex dilay Bartamaha Wadada KM-4
Somaliland: Xukuumadda oo dib u Cusboonaysiisay Heshiiskii Rayaale la galay Itoobiya ee ay ka Baxday
Mareykanka oo beeniyay in uu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Kuuriyada Waqooyi